NgoJanuwari 2020-Funda ukurhweba
Inyanga: January 2020
Iinkundla ze-EURJPY ngenkxaso ephambili kufutshane nenqanaba le-120.17
Ukuhlaziywa: 31 January 2020
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Januwari 31
Elona thoni lijikeleze imali yaseYurophu kukugcina ukubuyela kwi-EURJPY ukuya kwimimandla eyi-120.40, engekude nalapho isithintelo sokuqala sonikezelo sikumgangatho we-120.17.
Amanqanaba okumelana: 124.31, 123.37, 122.87
Amanqanaba enkxaso: 120.17, 119.99, 115.83
Kubume obukhulu, i-EURJPY ihlala ilungile kwipateni enciphayo esekwe kwi-127.52 (ephezulu). Ukuqhubela phambili kwinqanaba le-115.83 kubonwa njengentshukumo yokulungisa. Ukuchasana okuqinileyo kunokujongwa ekunciphiseni ukunganyangeki ukuba necala elifanelekileyo.
Nangona kunjalo, ukuqhekeka okuzinzileyo kokuxhathisa okungagungqiyo kunokuba nefuthe elikhulu lokuqhubela phambili kunye nendlela yokuxhathisa okuphambili kwe-127.52 ngezantsi.
I-EURJPY ihlala indibaniselwano ukusuka kwinqanaba le-119.66 kunye ne-intraday bias ihlala ingathathi hlangothi ekuqaleni kwaye ukuqhubela phambili kunokuqulathwa kukuchasana okungaphantsi kwenqanaba le-120.67 ukuphawula ukuqala kokunye ukwehla.
Ukuhamba phambili kokulungiswa kwinqanaba le-115.83 kufuneka kugqitywe kwinqanaba le-122.87, kwimeko ye-bearish ye-RSI yemihla ngemihla, ikhefu le-119.66 lekhefu linokusondela kwikhefu kwinqanaba le-115.83 eliphantsi. Nangona kunjalo, ukwehla kwenqanaba le-121.47 kungayiphelisa le mbono ye-bearish kwaye kutshintshe ingqalelo kwakhona kwinqanaba le-122.87.
Ixabiso lokungena: 120.67
Ukuqhambuka kweCoronavirus kuHanjise umothuko kwi-S & P 500 yeeNombolo zeSitokhwe
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Januwari 31
Inani leempahla ze-S & P 500 ezithengise ngaphezulu kwe-5 kunye ne-13 yomndilili wokuhamba ngolwesiHlanu wehla waya kwelona nqanaba lisezantsi ukusukela ngo-Okthobha. Ukuwa kweemakethi ngolwe-Sihlanu njengoko i-coronavirus isasazeka, ngalo mzuzu, inciphisa uvakalelo kunye nokubangela ukungaqiniseki ngexesha lamaxabiso aphezulu.
Amanqanaba okumelana: 3400, 3350, 3300
Amanqanaba enkxaso: 3200, 3157, 3026
I-SP 500 yaqala ukuvala ezantsi ukukhaba iveki, yahlangana ukuze izalise isikhewu, emva koko yabuya umva. Ngenxa yoku, kujongeka ngathi i-S & P 500 ekugqibeleni ikulungele ukufumana ukubuyela umva.
Inani elibalulekileyo lenkxaso kufutshane namanqanaba angama-3200 akhoyo, apho abathengi banokuxhomekeka kwiinkunzi ezilindelweyo. Ukuba elo nqanaba liyehla, kunokwenzeka ukuba siye ezantsi kumanqanaba angama-3100 emva koko.
Kwisakhelo seyure ezi-4, izikhundla zeenkomo zikho ngaphaya kwenqanaba lama-3263.00 ekujoliswe kuko kwinqanaba elikwi-3300.00 & 3316.00 ukongezwa.
Okwangoku, ukuhamba phantsi kwenqanaba lama-3263.00, ezinye izithuba ezimfutshane zikhona zokuqhubeka komgangatho osezantsi nenqanaba lama-3227.00 kunye nama-3200.00 njengeethagethi.
Isixhobo: I-S & P 500
Ixabiso lokungena: 3263
I-FTSE100 (i-UKX) ibambe kumanqanaba asezantsi, kunokwenzeka ukuba kube neBullish Double Bottom
Inqanaba lokumelana: 7,500, 7, 600, 7,700
Inqanaba leNkxaso: 7,300, 7,200, 7,100
Izolo, imarike yehle yaya kuma-7,833 asezantsi kwaye isitokhwe siqhubeka nokuhla siye ezantsi kwi-7,280. Le ibiyimeko ukusukela ngeJanuwari 17. Umgca osezantsi kukuba ixabiso liya kuqhubeka ukwehla de lifikelele kwinkxaso ye-7,100. Ukusuka kwitshathi, amaxabiso esitokhwe akhomba emazantsi kwetshathi.
Ngalo lonke ixesha imarike isiwa kuluhlu lwamaxabiso asezantsi, ukunyuka okuya phezulu kuya kuqala ukugqibezela intshukumo ebophelelayo. Ngentumekelelo, abathengisi ababophelelweyo banokuthatha ithuba lokutshintsha kwamaxabiso. Njengoko isitokhwe siwela kwinqanaba lamaxabiso asezantsi, urhwebo olude kufuneka luqaliswe. Emva koko uphuma kurhwebo lwakho olude kuluhlu lwamaxabiso aphezulu. Ngokufanayo, kwinqanaba eliphezulu lamaxabiso, kuya kufuneka uqale urhwebo olufutshane. Yonke imisebenzi yakho emifutshane kufuneka ikhutshwe kufutshane nexabiso lamaxabiso asezantsi.
Isitokhwe se-FTSE 100 sithengisa kwindawo ethe kratya kwintengiso. Isitokhwe singaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Kwingingqi ethengiswe ngaphezulu, abathengisi abayi kubakho ukuqhubekeka betyhala isitokhwe ezantsi. Kunoko, abathengi baya kuvela ukutyhala amaxabiso phezulu. Okwangoku, ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambeka ngokuthe tye zibonisa intshukumo ebophelelayo.
I-FTSE 100 (UKX) yeXesha eliPhakathi leNdlela: Ukuthwala
Kwitshathi yeeyure ezi-4, inyathelo lentengo lenze i-bearish kabini ephezulu eyenza ukuba isitokhwe siwe. Ixabiso liya kuwa, liphinde libuyele kwaye liqhubeke nokwehla. Uxinzelelo lokuthengisa kunokwenzeka ukuba luqhubeke.
Isitokhwe se-FTSE 100 siwile kwaye sifikelele kwinqanaba lama-26 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Oku kubonisa ukuba isitokhwe sifikelele kwingingqi ethe kratya. Abathengi kunokwenzeka ukuba bavele.
Umbono ngokubanzi we-FTSE 100 (UK)
Isitokhwe se-FTSE 100 sithengisa kwindawo ethe kratya kwintengiso. Abarhwebi baya kuthatha ithuba lokuqalisa urhwebo olude. Okwangoku, isitokhwe siyatshintsha phakathi kobubanzi obumiselweyo. Lonke urhwebo olude luya kuvalwa kuluhlu lwamaxabiso aphezulu.
I-FTSE 100 (UKX) uMqondiso woRhwebo
Isixhobo: I-FTSE 100 (UKX)
Ixabiso lokungena: 7,100
I-cybercriminals zixhaphaza uKobe Bryant's Demise
Abanye oosomashishini abanamathuba asebenzise i-cyber baqalise ukuxhaphaza ngokungekho mthethweni ukusweleka kwimbali yomnyazi owaziwayo we-basketball u-Kobe Bryant, osweleke nge-26 kaJanuwari, ngokufaka i-bugs kwi-intanethi kwabo bafuna izikhumbuzo ze-superstar.
Ubukrelekrele boKhuseleko lukaMicrosoft balumkisa nge-tweet nge-31 kaJanuwari ukuba abahlaseli babefaka iikhowudi ze-HTML ezinobungozi eziqulethe i-crypto-jacking command kwi-desktop yamaphephadonga e-NBA VIP.
I-Crypto-jacking yinto engekho mthethweni apho abahlaseli baqhekeza ngolunya iinkqubo zekhompyuter zamaxhoba angalindelekanga kwaye basebenzise amandla abo okuqhubekeka kwimigodi yeedigital kude.
Emva kwengozi eyintlekele yehelikopta eyasindisa ubomi babo bonke abakhweli ababekhwele ebhodini kubandakanya uKobe, intombi yakhe eneminyaka eli-13 ubudala uGianna, umqeqeshi webhola yomnyazi webhola yomnyazi, umqhubi wenqwelomoya, umqeqeshi webhola ekhatywayo kunye nentombi yakhe nenkosikazi yakhe, kunye nomnye umhlobo kaKobe kunye unyana wakhe, kuye kwakho ukonyuka okubonakalayo komdla kubo bobabini abalandeli nakuluntu.
Okulusizi kukuba, abophuli-mthetho bakubona oku njengethuba elihle lokuqhubela phambili nokwenza kwabo izinto ngokungekho mthethweni. Okukhona abantu bekhangela imifanekiso kunye nolwazi malunga neenkwenkwezi ezingasekhoyo, kokukhona amaxhoba abaxhamli befumana ithuba.
I-Microsoft crew ifumene ifayile enobungozi, iTrojan: HTML / Brocoiner.N! Lib kunye ne-Defender Virus application. Umyalelo we-crypto-jacking wawufihliwe njengephepha lodonga lomfanekiso weKobe. Kwakhona, kwafumaniseka ukuba iwebhusayithi ebamba umgodi weemali wayevinjwe sisicelo.
Ngaba ujonge kakuhle okanye unamathuba?
Ukupheliswa kukaKobe kubangele ukuphuma kwentlungu evela kwimithombo yeendaba zentlalo, ngakumbi ukusuka kumsunguli weTron, uJustin Sun. U-Kobe wayekholelwa kakhulu kwi-cryptocurrency (iTron ngokukodwa) kwaye kutshanje wathetha ngethemba le-blockchain ecaleni kwe-Sun kwinkomfa ye-niTROn kwi-2019.
Kwiintsuku ezithile ezidlulileyo, iLanga labhengeza ukuba inkomfa ye-niTROn yalo nyaka izakubanjwa malunga ne-superstar engasekhoyo. Nangona kunjalo, wayeza kugxekwa kanobom ngamajelo eendaba ezentlalo uninzi lwachaza isenzo sakhe njengongenelelayo nelihlazo.
tags I-Crypto-Jacking, Kobe Bryant, Microsoft
I-Bitcoin (BTC) izama kwakhona iiNqanaba eziPhambili eziQhekekileyo, ekunokwenzeka ukuba ziHambe kungekudala
Iindawo eziManyeneyo eziPhambili: $ 10,000, $ 11,000, $ 12,000
Iindawo eziNkxaso eziPhambili: $ 7, 000, $ 6, 000, $ 5,000
I-BTC / i-USD yexesha elide: Bullish
Iinkunzi ziye zabamba kwixabiso elingaphezulu kwe- $ 9,000 yenkxaso kwiintsuku ezine ezidlulileyo. Nangona kunjalo, ingqekembe iye yaguquguquka ngaphantsi kwe-9,600 yeedola. Ingqekembe iguqukile yaza yehla yaya kuthi xhaxhe kwi-9,200 9,200 yeedola, kulindeleke ukuba i-BTC ifumane inkxaso kwi-9,000 yeedola okanye kwi-9,000 8,800 yeedola kwaye iphinde iqhubeke nokunyukela phezulu. Iya kubonisa kakubi ukuba iibhere ziyaqhekeka ngaphantsi kwenqanaba lenkxaso ye-9,000 kwaye ixabiso lihle liye kuthi ga kwi-9,200 yeedola. Ngakolunye uhlangothi lwengqekembe, ukuba inkxaso ibamba i- $ XNUMX okanye i- $ XNUMX, ukunyuka okuphezulu kuya kuqhubeka.
Ukusuka kwisalathiso se-stochastic, i-Bitcoin ngoku ithengisa kwindawo ethengwe ngaphezulu kwe-80%. Oku kuthetha ukuba kwingingqi ethengiweyo yeenkunzi zeenkomo aziyi kubakho ukutyhalela phezulu i-BTC. Ngamanye amagama, abathengisi baya kufumaneka ukutyhala i-BTC ezantsi. Okwangoku, ingqekembe iphantsi kolawulo lwebhere, njengoko iBitcoin yehla. Ngeli xesha, ii-SMAs zisalathe emantla zibonisa uptrend.
I-BTC / i-USD yeXesha eliPhakathi lokuHamba: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ukunyuka okuphelisiweyo kuphelisiwe kwinqanaba lexabiso lama- $ 9,500. Emva kokuba iinkunzi zeenkomo zixhathisiwe, ukuhamba okulandelayo kuyaqhubeka. Ixabiso lihla kwinkxaso ye- $ 9,200. Akucaci ukuba ukuhamba ezantsi kuya kuqhubeka. Nangona kunjalo, ukuba uxinzelelo lokuthengisa luyaqhubeka intengiso iya kuwa kwi-9,000 yeedola.
I-SMA yeentsuku ezili-12 ngoku ibambe njengenkxaso yeBitcoin. Iimarike ziya kuqhubeka nokuhla xa amaxabiso eqhekeka ngaphantsi kweentsuku ezili-12 zeSMA. Okwangoku, i-Relative Strength Index ixesha le-14 kwinqanaba lama-55 libonisa ukuba iBitcoin ikummandla optrend. I-Bitcoin inokuvuka kwakhona.
Imbonakalo Jikelele yeBitcoin (BTC)
I-Bitcoin ibuyela kwindawo ephantsi ye- $ 9,286 njengoko intengiso ijongene nolunye uxinzelelo oluphambili. Nangona kunjalo, eli xabiso langoku lixabiso lembali kaJulayi. NgoJulayi, imarike yayidibanisa kwelo xabiso ngaphambi kokuthengisa uxinzelelo. Okwangoku, silindele ukuba inyathelo eliya phezulu liqhubeke.
Umqondiso woRhwebo lwe-BTC
Isixhobo: BTC / USD
Ixabiso lokungena: $ 9,352
Yeka: $ 9,000
Ithagethi: $ 10,300
tags Bitcoin, BTC, BTC / USD, Uhlalutyo lwamaxabiso
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin -I-Bitcoin yenze iyelenqe lokuBuyela umva emva kokuThengiswa okungaphezulu, Ngaba iBull ingayigcina i-Momentum in Shape?
• I-Bitcoin yehla yaya kwi-9300 yeedola emva kokubona -3% isaphulelo ngobusuku.
• Isimo esivuselelayo sinokumisa okwexeshana ukuba iBitcoin yaphula inkxaso yeedola ezingama-9200.
Ukulandela -3% ilahleko ngobusuku bonke, iBitcoin ngoku yehle yaya kuthi ga kwi-9300 yeedola emva kokuvavanya i-9555 yeedola njengokuphakama kweveki. Eli xabiso lisikiweyo latsala i-Bitcoin phantsi komgaqo wokuhamba kwitshathi yeyure. Ingakhokelela kolunye uhlengahlengiso ukuba amaxabiso ayaqhubeka ukwehla. Nangona kunjalo, abathengi basekhona. Ke, kukho ithemba lokunyusa ngakumbi ukuba banokuqinisa ngakumbi.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 9700, $ 10000
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 9000, $ 8600
Emva kokulahla kabukhali ukuya kwi- $ 9100 izolo, iBitcoin yathengwa yabuyela kwi-9500 yeedola ngaphambi kokumakisha phezulu yonke imihla kwi- $ 9555. Iibhere zisabele kwakhona ngesaphulelo kwi-9300 yeedola. Ixabiso leBitcoin lithengiswe kakhulu phakathi kwikota. Singafumana intshukumo emfutshane kwakamsinya kunakwelixa elizayo.
I-BTCUSD, itshathi yeyure -Januwari 31
Ukulindela intshukumo ye-bearish, kungafuneka sigcine iso kwinkxaso emhlophe ekhawulezileyo ($ 9200) ejolise kuyo i-BTC ngalo mzuzu. Ukulahla okukhulu kungathumela ixabiso kwi $ 9000 kunye ne-8600 yeedola, kanye kwinkxaso ye-wedge ngaphambi kokubuyela umva. Ngokuchaseneyo, iBitcoin inokuqhubeka nokukhula iye kumchamo we-wedge $ 9700 kunye ne-10000 yeedola ukuba ukumelana ne- $ 9555 kuyaphuka.
I-Bitcoin iye yehla ngaphantsi komgca we-orange okhulayo ohamba phambili owawunikezela ngenkxaso kwiimarike ukususela ngoJanuwari 26. Eli khefu lingaba libuhlungu xa i-BTC idonsa ngaphaya kwe-9250 yeedola, nangona inqanaba eliphambili lokuphumla lilele kwi-9100 yeedola - apho ixabiso leBitcoin liye lalelwa izolo. Ecaleni kweli nqanaba kukho inkxaso yengqondo ye- $ 9000- kanye kwindawo yesibini emhlophe.
Kwimeko apho i-Bitcoin idiphu kwaye ifumana inkxaso kula manqanaba exabiso akhankanyiweyo, kufanelekile ukuba silindele ukubuyela ngokukhawuleza kwi- $ 9555. Kodwa ukuba ukubuyela umva ngoku kujike kube bubuxoki, iBitcoin iya kuqhubeka nokuqhubela phambili emva kokubuyisa ukunganyangeki kwangaphambili. Ithagethi elandelayo yokuthenga iya kuba yi- $ 9700 kunye ne- $ 9800. Ukusuka kumbono wobuchwephesha, iBitcoin igqithisile kwaye ilungele ukulungisa ezantsi.
IBHAYIBHILE YOKUTHENGISA UMYALELO
Thengisa: $ 9394
I-TP: $ 9104 / $ 9034
SL: $ 9614
tags BTC, BTCUSD, Itshathi, Ixabiso leNtshukumo, Uhlalutyo lomsebenzi
I-FTSE100 (UKX) iyaqhubeka nokuNgena kwayo, phakathi kweDowntrend Move
Ukuhlaziywa: 30 January 2020
Inqanaba lenkxaso7,300, 7,200, 7,100
Isitokhwe se-FTSE 100 sihla kancinci emva kokuvavanya ukunganyangeki kwi-7,700. Ixabiso lihle laya kwi-7,383 ephantsi. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuhla kwexabiso kuya kuqhubeka ukuya kuma-7,100 asezantsi. Kuqatshelwe ukuba imeko yesiqhelo yesitokhwe kukuba kuzo zonke iinyanga, amaxabiso ehla ngesiqhelo aphela ngenkxaso ye-7,100. Emva koko ukunyuka okuphezulu kuya kuqala kwinkxaso.
Utyalomali kwisitokhwe se-FTSE 100 sinokwenziwa xa ixabiso likwinqanaba lenkxaso. Kule meko, ixabiso liwile kwinkxaso ngaphezulu kwezihlandlo ezine. Okwangoku, ixabiso lisaqhubeka nokuhla ngaphakathi kuluhlu lwamaxabiso ahlanganisiweyo.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambekele ngokuthe tye zibonisa ukuba intengiso isekwintshukumo ebophelelayo. Isitokhwe sihlonipha uluhlu lwamaxabiso entengiso. Umgca we-MACD kunye nomgca wesiginali ungaphezulu kwemigca zero ebonisa uphawu lokuthenga. Isenzo sexabiso kunye neMACD kubonakala ngathi asivumelani. Iibhanti zeMACD ziyagoba ngezantsi kwemigca zero ebonisa utshintsho lwendlela.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, amaxabiso abuyile kwangama-7,500 7,200 kwaye aqala phantsi ukwehla. Ukuba ezantsi intshukumo iyaqhubeka ixabiso liya kufumana inkxaso kwi-XNUMX. Kwelinye icala, ukuba ixabiso lifumana inkxaso kulayini wendlela, isitokhwe siya kubuyisa kwaye siqhubeke nokunyukela phezulu.
Isitokhwe se-FTSE 100 siwile kwaye sisondela kwinqanaba lama-33 leSalathiso seMandla esiNxulumene naMandla ixesha le-14. Sicinga ukuba ixabiso liwela ngaphantsi kwenqanaba lama-30, emva koko siza kuthetha ngexabiso elifikelela kummandla othengisiweyo wentengiso.
Isitokhwe se-FTSE 100 sisekuhambeni okubophelelayo kodwa amaxabiso asezantsi. Silindele ukuba ixabiso liza kuwa ezantsi kwi-7,100 ngaphambi kokuqala kwakhona kokunyuka.
Isixhobo: FTSE 100 (UKX)
Myalelo: Akukho mqondiso wokuthenga okanye wokuthengisa.
Hayi. I-RSI ayizukuwela ngaphantsi kwenqanaba lama-30 ngexesha lokubhalwa.
tags I-FTSE 100 (UKX)
I-AUDUSD ivuselela iiBhere, Yandisa iSilayidi ukuya kwiNqanaba le-0.6700
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-nge-30 kaJanuwari
Isibini semali ye-AUDUSD siqhubeka nokuhla ngexesha leseshoni yaseMelika ngoLwesine njengoko imeko yeemarike ekrakra ichaphazela i-dollar yase-Australia. Njengoku kubhalwa, esi sibini sasithengisa kwelona nqanaba lisezantsi ukusukela ngasekupheleni kukaSeptemba nge0.6712, njengoko ilahlekile yi-0.6% mihla le.
Amanqanaba okumelana: 0.7085, 0.6933, 0.6827
Amanqanaba enkxaso: 0.6700, 0.6670, 0.6620
I-AUDUSD yexesha elide iTrend: Bearish
Ukulindelwa kokuphinda kulungiswe kwidola yase-Australia kukongezwa okuphezulu kwakungachanekanga, njengoko idola lase-Australia lehlele kwinqanaba le-0.6700 ngaphambi kokuphola. Izalathi ze-Momentum ubukhulu becala azithathi cala kwaye ubuthathaka bamva nje kwidola yase-Australia kubonakala ngathi buzinzile.
Siphawula ukuthintelwa komngcipheko osezantsi kwaye silindele ukuba iAussie ithengise kuluhlu olufana nendlela okwangoku, mhlawumbi phakathi kwenqanaba le-0.6723 kunye ne-0.6769. Nangona kunjalo, idola yase-Australia khange ibonwe okwangoku kwaye ukuhamba okudlulileyo kwinqanaba le-0.6827 kunokubonisa ukuba ubuthathaka obukhoyo buzinzile.
I-AUDUSD yexesha elifutshane kwiTrend: Bearish
Idola yaseOstreliya yaphosa phakathi kuthelekiswa nedola yaseMelika emva kokudityaniswa okufutshane kunye nokukhetha kubuyile ebudeni bemini ezantsi. Ukwehla kwenqanaba le-0.7031 kulindeleke ukuba kuqhubeke ukubuyisela kwakhona kwinqanaba elilandelayo le-0.6670.
Kwicala elingaphezulu, ngaphezulu kwenqanaba le-0.6769, ukuxhathisa okuncinci kunokutshintsha ukungakhethi cala kwemihla ngemihla kuqala. Kodwa ukubuyisela kwimeko yesiqhelo kunokuqulathwa ngezantsi kwenqanaba lenkxaso le-0.6850, kwaye uxhathiso luye lwazisa enye into.
Ixabiso lokungena: 0.6723
I-WTI ihlala kubomvu njengoko amaxabiso ehla ngakumbi kufutshane ne-52.00 yexabiso
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDWTI-nge-30 kaJanuwari
Izihloko zamvanje zakutshanje ukuxhasa ukubuyisa kumaxabiso eoyile ekrwada. Ngeyure yokuqamba, i-West Texas Intermediate barrel yayihamba kwinqanaba le- $ 52.22, isusa i-1.45% mihla le. Amaxabiso akrwada e-WTI atshone ikakhulu ngenxa yenkxalabo malunga neCoronavirus, kwaye uLawulo loLwazi lwaMandla (i-EIA) luthi isitokhwe seoyile sase-US sonyuke ngaphezulu kunokuba bekulindelwe kwiveki ephelileyo.
Amanqanaba okumelana: $ 63.04, $ 58.70, $ 54.00
Amanqanaba enkxaso: $ 52.05, $ 51.44, $ 50.64
I-USDWTI yexesha elide iTrend: Bearish
Okwangoku, i-WTI crude iphantsi kwe-0.95% ukuya kwinqanaba le-51.69 kwaye ukophula kwinqanaba le-51.44 yeedola (ngoJan 30 esezantsi) kujolise kwinqanaba le-50.64 yenqanaba (ngo-Okthobha u-3, 2019, ezantsi). Kwelinye icala, umqobo olandelayo we-bullish ubekwe kwinqanaba le-54.35 yeedola (nge-29 kaJanuwari ephezulu), ubolekisa nge-57.40 yeedola emva koko i-58.70 yeedola xa uzama ukuwela i-avareji ehambayo ye-5 kunye ne-13.
Nangona kunjalo, umhlangano owandisiweyo awunakukhutshelwa ngaphandle ngaphambi kokuba abathengisi baqale kwakhona ukwehla, njengoko izalathiso zemihla ngemihla zigqithisiwe, kodwa abanalo uphawu olucacileyo okwangoku.
I-USDWTI yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Qalisa
Ngokobuchwephesha, ixabiso leoyile ekrwada ye-WTI iseke inkxaso ephantsi kabini ejikeleze inqanaba lama- $ 52.05, kwaye ukuvalwa kwamakhandlela eeyure ezi-4 edlulileyo kweli nqanaba kunokunceda ukuqhuba umkhwa we-bullish kwi-oyile ekrwada ye-WTI.
Kwicala eliphezulu, i-oyile inokufumana ukunganyangeki kwinqanaba le- $ 54.00 ngelixa ukuphuma kwe-bearish kuvula elinye igumbi lokuthengisa kude kube yi- $ 50.64. Ikhontrakthi ibambe ngombala obomvu kusuku lwesibini kwaye isendleleni yokubuyisa ngokupheleleyo ukubuyisa okufutshane kumanqanaba ($ 52.14 / $ 54.35).
Ixabiso lokungena: $ 52.05
Yeka: $ 54.00
Ithagethi: $ 50.64
tags Uhlalutyo Technical, I-USDWTI
Idabi lokuNgaphaya kweLungelo lokuCingelwa kwe-Cryptocurrency Launderer
Abasemagunyeni baseFrance bammangalele owayesakuba ngumlawuli wotshintshiselwano nge-cryptocurrency kutshanje e-BTC-e nommi waseRussia u-Alexander Vinnik.
Ngokwengxelo eyenziwa nguBloomberg ngomhla wama-28 kaJanuwari, igqwetha likaVinnik laqinisekisa ukuba liza kuhlala eFrance ukuze lijongane nesityholo abekwa sona kulandela ukubuyiswa kwakhe eGrisi. Igosa elingaziwayo elivela kwi-ofisi yomtshutshisi liveze ukuba uVinnik ujongene nezityholo ezininzi kubandakanya nokuphanga, ukuxhaphaza imali ngokungekho mthethweni kunye nokwenza iyelenqe.
Ukubuya koMthetho kunye nokuQala
Elinye lamagqwetha omtyholwa laxelela oonondaba ukuba emva kokugqitywa kwetyala lakhe eFrance, uzakubuyiselwa eGrisi apho aya kuthi emva koko abuyiselwe e-US. Emva kokugqitywa kwesimangalo e-US, uya kuphinda asiwe kwilizwe lakhe, iRussia.
Uphando lwaseFrance lusasebenza kodwa akukho zimangalo zibiziweyo okwangoku. Igqwetha laseVinnik laseFrance, uAriane Zimra ubanga ukuba akukho nto idibanisa amabango abatshutshisi kunye nomthengi wakhe.
Ummangalelwa uxelwe ukuba usesibhedlele emva kokuqalisa isitrayikhi sendlala esimalunga neentsuku ezingama-40 ngokuchasene nokubanjwa kwakhe. Igqwetha lakhe laye lafaka isicelo sokungabikho kokusesikweni kwiintsuku ezithile ezidlulileyo, ngokusekelwa kulwaphulo-mthetho lwamalungelo abaxumi bakhe.
Elinye igqwetha likaVinnik lathi umthengi wakhe, lowo wambiza ngokuba ngu "blockchain genius," wayecinezelwa ngabasemagunyeni abambona njengoyicaphukisayo inkululeko yecandelo lezemali.
Ukuphindwaphindwa kwetyala likaVinnik
UVinnik ukrokrelwa ukuba uyinxalenye yokuqhekeza ebandakanya i-Bitcoin exchange Mt. I-Gox njengoko iimali ezibiweyo (malunga ne-300k BTC) zafunyanwa kungekuphela nje ukuba ziye zahlanjwa nge-BTC-e kodwa zafunyanwa nakwisipaji sayo kuvavanyo.
Ngokusekwe kwezi zityholo, umlawuli we Mt. U-Gox wafikelela e-United States i-DOJ ecela idatha ngaye.
Umrhanelwa ekuqaleni wamangalelwa e-US ngoJulayi ka-2017. Inkundla yase-Greek kamva yacela ukuba abuyiselwe e-Russia ngo-Septemba ka-2018. Ngo-Julayi ka-2018, nangona kunjalo, abasemagunyeni baphinde bagweba ukuba umrhanelwa abuyiselwe e-France, apho akhoyo ngoku .
Ukukhutshelwa ngaphandle kukaVinnik kuye kwaba yinto yomzabalazo wozakuzo kunye namazwe aliqela, ngakumbi ilizwe lakowabo iRussia, bezabalazela ukufumana ukubuyiswa kwakhe.
tags UAlexander Vinnik, BTC-e, Ubuqhetseba beCrypto, Ukuqhekeka kwemali yedijithali, Mt Gox
← Entsha izithuba1 2 ... 16 abaDala izithuba →